ED MILIBAND ၏ နစ်နာနေသော အဆင်မပြေမှုသည် ဗြိတိန်အတွက် လိုအပ်သည် - UNIVERSITY OF CAMBRIDGE - ဘဝ
Ed Miliband ၏ နစ်နာနေသော အဆင်မပြေမှုသည် ဗြိတိန်အတွက် လိုအပ်သည့်အရာသာဖြစ်သည်။
ISOBEL COCKERELL၊ အပတ် 2- ပေါ့ပ်နိုင်ငံရေး
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ညီမငယ်က သူမဲပေးမယ်လို့ ကြေညာထားတယ်၊ စောင့်တယ်၊ ရှေးရိုးစွဲ။ ငါ့နှမ နှစ်ဆယ်။ ဇာတ်လမ်းတစ်ခု။ သူမ၏ ပါးပြင်တွင် နှင်းဆီပန်းများ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ရှိနေဆဲ၊ သူမ၏ မျက်လုံးများတွင် ရှင်သန်နေသော လူငယ်များ၏ တောက်ပမှု။ ဒါဟာ ကြေကွဲစရာ အခိုက်အတန့်ပါပဲ။ 'ဒါပေမယ့် ငါတို့တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ Ed Miliband ငါတို့အဖြစ် ဝန်ကြီးချုပ်!' ထိတ်လန့်တကြား တုန်လှုပ်သွားသောအခါ သူမက ပြန်ပြောသည် ။ 'ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်မှာ သူ့ကိုကြည့်။ သူက စာကြောင်းတစ်ကြောင်းလောက်သာ ညှိလို့ရတယ်!' သူမ မှားမှာ စိုးလို့ သူမတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘူး။
မနေ့က UL မှာ (ဒီကော်လံမှာရှိတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေအားလုံးကို UL အနောက်ခန်းကနေ ထွက်ပေါ်လာတာပါပဲ၊ အဲဒါက ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့ မွဲခြောက်ခြောက်ခြားစရာပါပဲ) သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူမဲပေးခဲ့တာကို မပြောခဲ့ပါဘူး။ 'အဲဒါ သီးသန့်ပဲ' ဟု တိုးတိုးလေးပြောသည်။ ရင့်မှည့်နေသော ငယ်ရွယ်စဉ်တွင် Tory ကို မဲပေးခြင်းသည် အမှန်ပင် ရှက်ဖွယ်ကောင်းပေသည်၊ သို့သော် ယင်းမှာ ဖြစ်ပျက်နေပါသည်။
ကျေးဇူးပြုပြီး ငါ့ပရိုဖိုင်ကို ဆဲဆိုမနေပါနဲ့။
'သူမက မိုက်ပေမယ့် ဆိုးတယ်'
ထိုလူငယ်သစ္စာဖောက်များကို ခုခံကာကွယ်ရာတွင် Ed Miliband သည် လူငယ်များကို စမ်းကြည့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆိုးရွားလှသည့်အရာတစ်ခု အမှန်တကယ်ရှိပါသည်။ #Milifandom သည် ရယ်စရာကောင်းပြီး ဉာဏ်ကြီးရှင် တီထွင်မှုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ အရိုင်းစိုင်းဆုံးသော စိတ်ကူးယဉ်မှုများတွင် Mandelson က အိပ်မက်မမက်နိုင်သော်လည်း Adenoidal Ed ကို စိတ်လှုပ်ရှားစေရန် အမှန်တကယ် အဆင်မပြေဖြစ်နေပါသည်။ သူသည် အနည်းငယ်မျှသာ တွေးတောတတ်သူဖြစ်ပြီး ၎င်းကို လှည့်ပတ်ရန် နည်းလမ်းမရှိပါ။ သူ့ကိုယုံဖို့ ကျွန်တော်တို့ကို ဘယ်နှစ်ခါ တောင်းနေပါစေ သူ 'မာနကြီးတယ်' ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ဘယ်သူမှ မဝယ်နိုင်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဒါကောင်းတဲ့အရာဖြစ်နိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခက်ခဲသောခေါင်းဆောင်တစ်ဦးကို မလိုအပ်ပေ၊ သို့သော် ယင်းအစား၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို တံစို့တစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုကို ဖြုတ်ချနိုင်သည့် ဝေါလက်စ်ကဲ့သို့ ရွှဲရွှဲစိုနေသော သတ္တဝါဖြစ်သည်။ ဗြိတိန်သည် ကြီးမားသော ပုံသဏ္ဌာန်ပြဿနာရှိသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာ့စူပါပါဝါမဟုတ်တော့သည်ဟူသောအချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မလွန်ဆန်နိုင်ဘဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုလိုနီခေတ်လွန် အတ္တခရီးကို ဖျောက်ဖျက်ရန် - အလွန်အမင်း လိုအပ်ပါသည်။ Cameron ကဲ့သို့ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံများသို့ ချော့မော့သော PR ဘီလူးတစ်ကောင်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မလိုအပ်ပါ။
Ed လက်အောက်ရှိ အစိုးရတစ်ခုသည် ကင်မရွန်း သို့မဟုတ် ဘလဲ၏ အစိုးရအဖွဲ့ ဖြစ်ခဲ့သည့် ကမ်ပိန်းကို တိုင်းတာသည့် ပြိုင်ဆိုင်မှု ဖြစ်လာမည်မဟုတ်ပေ။ ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းမလဲ တွေးကြည့်လိုက်ပါ – အလွဲအချော်တွေကို တွေးကြည့်လိုက်ပါ။ တွေးပါ။ memes များ။ စည်းလုံးညီညွတ်တဲ့ ချီတက်ပွဲတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဟာ ချောက်ချားစရာကောင်းလောက်အောင် ရုပ်ရည်ဆိုးလာမှာကို စိုးရိမ်နေမယ့်အစား (Ed က ဒီလိုမျိုး ရွံ့ရွံ့နေမှာ သေချာပါတယ်၊ သူသေချာပေါက် ခွေးခြေရာကို နင်းမိလိမ့်မယ်၊ သူ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ရလိမ့်မယ်) ငါတို့ထိုင်ပြီး ရယ်စရာကောင်းတဲ့ စပျစ်နွယ်ပင်တစ်ပင်ပြီးရင် သူ့နောက်က ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တိုင်းနဲ့ ဘောလုံးကန်နေတာကို ကြည့်လို့ရပါတယ်။
လူမှုရေးအရ ညံ့ဖျင်းသော အရှုံးသမား ဦးဆောင်သည့် ချစ်စရာကောင်းပြီး အိုးထွင်ကျဲကျဲ ဖြစ်နေသော နိုင်ငံငယ်လေး ဖြစ်လာမည့် ဗြိတိန်သည် ဗြိတိန် ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ဒီသဘောတရားကို ကျော်လွှားဖို့ အချိန်တန်ပြီ။ နေ့စဉ်မေးလ် အင်ပါယာဗြိတိန်၏မောင်းနှင်အားစံပြ။ ၎င်းသည် လွမ်းဆွတ်သော ဗြိတိသျှစိတ်ထား၏ နောက်ကွယ်တွင် သာယာလှပမှုတစ်ခုအဖြစ် ကျန်ရှိနေသော်လည်း ယင်းသည် အန္တရာယ်ကင်းသော လွမ်းဆွတ်မှုမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မြင့်မြတ်သောခေတ်ကြီးသည် သေလွန်သွားပြီဖြစ်သည်- ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါတို့ လုယက် လုယက်နေတာ ကြာပြီ။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးတော့ ငါတို့ရဲ့ အရေးမပါတာကို လက်ခံဖို့ အချိန်တန်ပြီ။
Ed က ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲလေ။ ပထမဆုံး အထင်အမြင်မှာ သူက မင်းရဲ့ ပုံမှန် Oxbridge-educated PPE-er လို့ ရိုက်နှိပ်ခံရနိုင်ပေမယ့် Bullingdon ကောင်လေးကတော့ သူမဟုတ်ပါဘူး။ မျက်လုံးချင်းမထိန်းနိုင်ဘဲ ဘေကွန်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်စားခြင်းကဲ့သို့ သာမန်အရာများကိုပင် ရှိုက်လိုက်မိသည်။
အိန္ဒိယ အောင်ပွဲတွေ အခု ဘယ်ရောက်နေလဲ။
ကင်မရွန်းသည် ၎င်း၏ချစ်စရာကောင်းသော Cotswolds မဲဆန္ဒနယ်အိမ်အတွက် ၎င်း၏ချစ်စရာကောင်းသော Cotswolds မဲဆန္ဒနယ်အိမ်အတွက် ကင်မရွန်းအတွက် အသုံးစရိတ်အရှုပ်တော်ပုံတွင် မထီမဲ့မြင်ပြုနေချိန်တွင် အက်ဒ်သည် စုစုပေါင်းစရိတ်ထောက်ပံ့ကြေး၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပင် တောင်းဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။
မသေချာမရေရာသော ဤခေတ်ကြီးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘလဲရစ် (သို့) ချောမွေ့သော မျက်လုံးဖြင့် မကောင်းသော ဇာတ်လမ်းကို မလိုအပ်ပါ။ သူသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းကို ဗုံးကြဲရန် စိတ်အားထက်သန်နေသောကြောင့်မဟုတ်ဘဲ စိတ်သက်သာရာရနိုင်သော ကျောင်းဟောင်း ဆိုရှယ်လစ်တစ်ဦး လိုအပ်သည် (Miliband သည် ၎င်း၏အစ်ကိုနှင့် ဘလဲ၏ အီရတ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုကို အမြဲရှုတ်ချခဲ့ပြီး အာဆတ်၏ ဗုံးခွဲမှုကို ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်) ဒါပေမယ့် YOLO က ဘာကိုဆိုလိုမှန်း မသိတာကြောင့်ပါ။
ငါ့ကို Milibae ကိုနေ့တိုင်းပေးပါ။
Cameron သည် ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်ခဲ့ဖူးသော ဗြိတိန်မျိုး၏ စက်ရုပ်ပုံသဏ္ဍာန်တွင် အထက်တန်းစား၊ အစွမ်းထက်သော၊ အားလုံးသိပုံရသော၊ သူသည် အရာအားလုံး 'လူ့အဖွဲ့အစည်း' ကိုကိုယ်စားပြုပြီး 'လူများ' နှင့် သူ၏ဆက်ဆံရေးသည် အထူးပြင်ဆင်ထားသော အသံထွက်များနှင့် ဂရုတစိုက်ပြင်ဆင်မှုပုံစံဖြင့် လာပါသည်။ ကင်မရွန်းသည် သူသည် ပို၍ 'နိုင်ငံတော်သားများကဲ့သို့' ဖြစ်သည်ဟု ယူဆရသည့် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် မဲပေးခြင်းသည် လွန်ခဲ့သည့်ခေတ်က ဗြိတိန်၏ အဓိပ္ပါယ်မဲ့သော အယူအဆနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့ အလွန်အမင်းလိုအပ်နေသည့် ဗြိတိန်နိုင်ငံဖြစ်သည်။
Miliband အတွက် မဲပေးခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ဗြိတိန်နိုင်ငံအတွက် မဲပေးခြင်းဖြစ်သည်- အနည်းငယ် မာနနည်းပြီး၊ အနည်းငယ် ပို၍ နှိမ့်ချသည်။ အင်ပါယာ ကုန်ဆုံးချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ဆွဲငင်လာခဲ့သည့် ကိုယ်အလေးချိန်ကို ချပစ်ရန် လိုအပ်ပြီး၊ ငါတို့နားမှာ Ed နဲ့။